ပုဂံနံရံဆေးရေးပန်းချီလေ့လာသင့်တဲ့ဘုရား အပိုင်း ၁ - LODGGY
ပုဂံမြေကိုအလည်တခေါက်ရောက်ဖူးသူတိုင်း ဂူဘုရားတွေ၊ ဥမင်အတွင်းတွေမှာ နံရံဆေးရေးပန်းချီတွေခြယ်မှုန်းအလှဆင်ထားတာကို တွေ့မြင်ဖူးမှာပါ။ ဒီပန်းချီတွေမှာထဲမှာဆိုရင် ဇာတ်နိပါတ်ဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံဘုရားဆင်းတုများ၊ အနောဝတအိုင် စတဲ့ပုံတွေအစရှိသည်ဖြင့်တွေ့ရမှာပါ။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ရုပ်ပုံတွေဆိုသော်လည်း မဟာယနဆိုင်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာပန်းချီတွေ၊ ဗောဓိသတ္တပုံတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဆေးအနေနဲ့ အဝါရောင်အတွက် ဆေးဒါန်း (Arsenic Trisulphide)၊ အနီရောင်အတွက် ဟင်္သာပြဒါး(Mercuric Sulphide)၊ အပြာရောင်အတွက် ဒုတ္တာ၊ လိမ္မော်ရောင်အတွက် ဆုန်း (Triplumbic Tetraoxide)၊ အဖြူရောက်အတွက် မြေဖြူ (Calcium carbonate)၊ အနက်ရောင်အတွက် ရေနံချေး မင်အရောများကို သုံးစွဲကြပါတယ်။
ပုဂံဆေးရေးပန်းချီများဆိုတာ ပုဂံခေတ် ပုဂံသားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဟန်တွေဆိုပေမဲ့ မူလနည်းယူရာမှာ အိန္ဒိယပြည်အရှေ့ ဘင်္ဂလားနယ်တဝိုက်ကြီးစိုးခဲ့သော ပါလမင်း၊ သေနမင်းလက်ထက် က အနုပညာများကိုမှီခိုထားတာကို လေ့လာရပါတယ်။
အပိုင်း ၁ အနေနဲ့ ပုဂံနံရံဆေးရေးပန်းချီလေ့လာသင့်တဲ့ဘုရား တွေကိုစုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားသုံးဆူဟာ ပုဂံမှာတခုထဲသော ဂူအလတ်သုံးခုကို တွဲဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုထူးခြားချက်က အရှေ့ဘက်ဂူဘုရားမှာ ဆေးရေးအပြည့်အစုံရှိပြီး အလယ်ဂူမှာ အပြီးမသတ်ရသေးတဲ့တပိုင်းတစပန်းချီတွေတွေ့ရသလို အရှေ့ဂူဘုရားမှာတော့ ဆေးရေးမရှိတာကိုလေ့လာရမှာပါ။ အကြောင်းတစုံစုံကြောင့် ပန်းချီရေးဆွဲတာ ရပ်တန့်သွားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဇာတ်ကွက်များနဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်ဆိုင်ရာများကို အဓိကရေးဆွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပန်းချီပြတိုက်တခုလိုကျန်နေသေးတော့ အသေးစိပ် လေ့လာသင့်တဲ့နေရာတခုပါ။။
2. ဂူငယ် (၄၈၀/၂၇၉)
ဘုရားသုံးဆူရဲ့ အရှေ့ဘက် ယာခင်းအလယ်မှာ ဂူငယ်ဘုရားတဆူ ရှိပါတယ်။ ဂူငယ်ဆိုပေမဲ့ ပုဂံခေတ် ပန်းချီအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဂူငယ်ပါ။ ပုံမှန် ဂူဘုရားတွေလို ပလ္လင်နဲ့ရုပ်ပွားတော်မပါဘဲ နံရံမှာ ဗုဒ္ဓပုံကြီးကိုရေးဆွဲထားပါတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ အုတ်ပုလ္လင်နဲ့ရုပ်ပွားတော်ငယ်တဆူ ပူဇော်ထားပါတယ်။ နံရံအပေါ်ပိုင်းမှာလဲ အစိမ်းရောင်တောက်ပနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် နဲ့ ပန်းတန်းတွေကို မူလအကောင်းတိုင်းလိုကျန်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။
3. ဂူပြောက်ကြီး (မြင်းကပါ)
မြင်းကပါ ဂူပြောက်ကြီးဘုရားကို ရာဇကုမာရ် မင်းသားက ၁၁ ရာစုတွင် တည်ထားခဲ့တာပါ။ ဘုရားကို ဝင်ဝင်ခြင်းမှာပင် မတ်တပ်ရပ်နတ်ရုပ်ကြီးတွေကို တွေ့မြင်ရပါမယ်။ အလင်းရောင်နည်းနည်းသာရှိလို့ဓါတ်မီးအကူအညီနဲ့မှလေ့လာလို့ကောင်းမယ်။ ဒီလိုအမှောင်ကျနေလို့လဲ ဆေးရေးတွေကို မပျက်မဆီးနဲ့ အများအပြားတွေ့မြင်တာပါ။ နံရံအတွင်းမှာ ၅၅၀ ဇာတ်ကွက်၊ ကောသလအိမ်မက် ၁၆ ချက်၊ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များ၊ သင်္ဂါယနာတင်ပုံများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
4. ဂူပြောက်ကြီး (ဝက်ကြီးအင်း)
ဝက်ကြီးအင်းဂူပြောက်ကြီးဟာ ၁၃ရာစုအစောပိုင်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားပါ။ အပေါ်ကွမ်းထောင်က ဗုဒ္ဓဂယာက မဟာဗောဓိပုံမျိုးဆောက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ၁၈၉၉ လောက်က Thomas ဆိုတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးက ဆေးရေးတွေကိုလွှနဲ့တိုင်ပြီး အချပ်လိုက်ခိုးယူဖို့ကြိုးစားဖူးတယ်။ နံရံဆေးရေးတွေအနေနဲ့ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားများ၊ ဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာများ၊ စသည်ဖြင့်ပါရှိပါတယ်။
အပါယ်ရတနာဘုရားဟာ မြင်းကပါရွာမှာတည်ရှိပြီး AD 11 ရာစုနှောင်းပိုင်း သီဟိုဠ်ပုံ လိုဏ်ဂူတစ်ဆင့် ဂူဘုရား အဖြစ် ကျန်စစ်သားနဲ့အပါယ်ရတနာတို့တည်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်စစ်သားမင်း စောလူးမင်းအန္တရာယ် ရှောင်စဉ် အပါယ်ရတနာနဲ့ လျှို့ဝှက်တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ဘုရားတည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီဘုရားမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာအပြင် မဟာယနဆိုင်ရာရုပ်ပုံတွေဖြစ်တဲ့ လောကနာထ ကြာပွင့်ပေါ်ထိုင်ပုံ၊ ရသေ့၊ ဗြဟ္မာ၊ ဗိဿနိုးပုံတွေကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လောကထိပ်ပန်ဘုရားကို အလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက် AD 12 ရာစုက ကွမ်းတောင်ပေါက် လိုဏ်ဂူတဆင့် ဂူဘုရား အဖြစ် တည်ခဲ့ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာ အပျက်အစီးနည်းတဲ့ နံရံပန်းချီနဲ့ ကမ္ပည်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်မှာပါ။ ဇာတ်ကြီး ဆယ်ဘွဲ့ပုံများကို ကမ္ပည်းစာနှင့်တကွ ရေးသားထားပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဝင်ရှစ်ခန်း၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပုံတော်နှင့်ဘွဲ့အမည်များကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်အလှအပကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးဆွဲထားတော့ ပုဂံခေတ် ဝတ်စားဆင်ယင်ဟန်တို့ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အနုမှာ အာနန္ဒာလို့ နာမည်ကျော်ဇောတဲ့ အာနန္ဒာဘုရားဟာ ၁၀၉၀ ခုနှစ်မှာ ကျန်စစ်သားမင်းတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ လေးမျက်နှာမှာ ကောဏဂုံ၊ ဂေါတမ၊ ကဿပ၊ ကကုသန် လေးဆူရှိတယ်။ အစကတော့ ထုံးသုတ်ပူဇော်တယ်ဆိုပြီး ဆေးရေးတွေပျက်စီးကုန်တယ်။ အခုတော့ အိန္ဒိယပညာရှင်အကူအညီနဲ့ ဆေးရေးတွေအကုန်လုံးကို ပြန်လည် ဖော်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ၅၅၀ ဇာတ်သရုပ်ဖော်ပုံ၊ ဘုရားဆင်းတုတော်ပုံများ၊ အနောဝတအိုင်ပုံများတွေကို ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။
8. ဘုရားအမှတ် ၅၇၁
တစ်ဝက်တစ်ပျက်ကျန်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ နာမည်နဲ့နောက်ခံသမိုင်း သေချာမရှိတော့တဲ့ ဘုရားအမှတ် ၅၇၁ ဟာ ဇံသီးဂူတစ်ဝိုက်ကဘုရားတွေထဲတော့အကြီးဆုံး ဂူဘုရားတစ်ဆူဖြစ်ပါတယ်။ လူအရောက်အပေါက်နည်းလို့ ဆေးပန်းချီအတော်အများကျန်တဲ့ ဂူဘုရားတဆူပါ။တွေ့ရတဲ့နံရံပန်းချီတွေမှာဗုဒ္ဓဝင်ကွက်တွေခြံရံထားပြီး အလယ်မှာကျောင်းဆောင်နဲ့အတူဗုဒ္ဓဝင်ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားတွေ၊ ဗြဟ္မာကြီးရုပ်တွေ၊ နတ်ရုပ်တွေ၊ ဘီလူးရုပ်တွေ စတာတွေကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဆွဲလက်စနဲ့ရပ်သွားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
Reference : 1. ဦးဗိုကေ – ပုဂံသုတေသနလမ်းညွှန်
2. တင်နိုင်တိုး – ပုဂံအဘိဓာန်
3. ကိုမျိုးဆွေသန်း – https://www.facebook.com/DESIGN.MST
4. ကိုစည်သူသန့် – https://www.facebook.com/SithuThant91